सात एल्वम र सात उपन्यास लोकार्पण – Rajmarg Online
सात एल्वम र सात उपन्यास लोकार्पण
दाङ, पुस । दाङमा राप्तीको साहित्यीक अबस्थाको बारेमा छलफल र परिचर्चा गरिएको छ । लेखक तथा गीतकार डा. डि आर उपाध्यायको सात वटा गिती संग्रह र सात वटा उपन्यासको विमोचन कार्यक्रमकै अबसरमा राप्तीको साहित्यीक विकास र चुनौतीको विषयमा छलफल गरिएको हो ।
कार्यक्रममा बोल्ने बक्ताहरुले राप्तीको फाँटबाट धेरै लेखक तथा श्रष्टाहरु जन्मिएर देशले चिन्ने गरेको बताए । राप्तीको साहित्य कमजोर नभएको समालोचक तथा गजलकार टिकाराम उदासीले बताउनुभयो । गीतकार प्रकाश केसीले पनि देशका अब्बल गितहरुको छनौट गर्दा दाङका श्रष्टा र श्रृजनाहरु अगाडी नै आउने बताउनुभयो ।
राप्ती साहित्य परिषद्का अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दाङमा सम्पुर्ण साहित्यीक संघसस्थाहरु क्रियाशिल रहेको र त्यसको छाता संगठनको रुपमा रहेको परिषदले पनि साहित्यीक गतिविधिहरुको साथै साहित्यीक छलफल र चर्चापरिचर्चाका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ठ साहित्यकार गिरीराज शर्माले दाङको साहित्य अब्बल रहेको बताउनुभयो ।
गीतकार उपाध्यायले एकै पटक प्रकाशन गर्नुभएको सात वटा एल्वमको र स्थानीय साहित्यीक गतिविधिहरुको बारेमा चर्चाका लागि देशका सातै वटा प्रदेशमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । एल्वममा सन्तोष श्रेष्ठ र सागर अधिकारीले सगीत गर्नुभएको छ भने नेपालका चर्चित गायकहरुले स्वर दिएका छन् ।
कार्यक्रममा बोल्दै लेखक तथा गीतकार उपाध्यायले शब्दसंग धेरै शक्ति भएको बताउनुभयो । मानिसको जीवनसंग शब्द र संगीत धेरै नजिकका विषयहरु भएको भन्दै उहाले साहित्य र संगीतबाट पाउने भन्दा पनि समाजलाई दिने कुराहरु भएको बताउनुभयो । कार्यक्रममा गीतकार सुरेश घिमिरे, डा. लोकराज पराजुली लगाएतले बोल्नु भएको थियो ।
राप्ती साहित्य परिषद् दाङका अध्यक्ष कमलमणि देवकोटाको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सहजीकरण लिलप्रकाश चन्दले गर्नुभएको थियो ।